Industrylọ ọrụ ntinye ego na-eto eto | Martech Zone
Ngwaahịa Apple pụtara na 30% nke ihe nkiri kacha elu 33 na 2010. Nike, Chevy na Ford na 24%. Sony, Dell, Land Rover na Glock na 15%. Ntinye ngwaahịa bụ ụlọ ọrụ $ 25 ijeri ugbu a. N'ezie, ihe nkiri James Bond na-esote ga-ekpuchi otu ụzọ n'ụzọ atọ nke mmefu ego ya na $ 45 na ntinye ego ngwaahịa.
Pontiac nwere olile anya ire 1,000 Solstices na ụbọchị 10. Kama nke ahụ, ha rere 1,000 Solstices na nkeji 41 mgbe ekpughere ya na The Apprentice.
Ka ndị na-azụ ahịa na-eguzosi ike ma ọ bụ na-enweghị mmasị na mgbasa ozi, atụmatụ dị ka itinye ngwaahịa na-enweta ike. Ndekota nke ihe nkiri ụlọ ọrụ bụ nkwado na ọdịnaya ọdịnaya. Dị ka ndị mmepe ọdịnaya na-ewulite ikike ma na-abawanye ndị na-ege ha ntị, ohere ịba ụba ego site na nkwado na-ewu. Martech Zone adịghị iche… Zoomerang na Delivra dị oke mkpa nye ikike anyị iji nwee ike ịkwalite na itinye ego na Martech. (Anyị na-achọkwa ndị nkwado ọzọ, ọ bụrụ na ị nwere mmasị).
Naanị ihe dị iche nke m na-ahụ bụ iwu gọọmentị etiti jikọtara na nke ọ bụla. Ọ bụ ezie na m ga-ekwupụta n'ihu ọha mmekọrịta ọ bụla m nwere n'ime ọdịnaya anyị dere, ụlọ ọrụ ihe nkiri ahụ na-ekwu ụfọdụ ozi na njedebe nke ihe nkiri ahụ. Na ego Hollywood na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-eme ihe dị iche!
Iwulite nd i na-ege nt i na-ewe oge na nnukwu mgbal i. Chọta onye gị na ndị na-ege ntị nọrịị na ịmekọrịta ha bụ nnukwu ihe ọzọ. Site na blọọgụ a, ọ dị oke mkpa ka ndị na-akwado anyị bụrụ nnukwu ụlọ ọrụ ebe ọ bụ na anyị na-eche aha anyị egwu ma na-etinye ndị na-ege anyị ntị n'ihe egwu mgbe anyị na-akwalite ha. Amaghị m na ihe nkiri dị n'ihe ize ndụ! A nkiri na bọmbụ anaghị adị mkpa ka ala ngwaahịa ha na-akwalite… na a lousy ngwaahịa na ọ bụchaghị anapụ nkiri.
Site: Ndụmọdụ MBA dị n'ịntanetị
Tags: ọnyịnye ngwaahịa appleetinyere ngwaahịaHollywoodntinye ngwaahịa hollywoodinfographicjames bond ngwaahịa pụrụ isi chọtaihe ntinye ihe nkirintinye ngwaahịatoy akụkọ ngwaahịa pụrụ isi chọta
Persuasive Unignorable Mkpa Rememberable
Nov 21, 2011 na 5:59 PM
Nhazi usoro bu nnukwu ugbu a. Ntinye ngwaahịa enyerela aka na nke ahụ, echekwara m na ọ ga-eto.